Griezmann oo xaqiijiyay in uusan meelna uga socon Atletico | Gaaroodinet
June 5, 2017 - Written by horseed horseed
Hargeysa(GRDI)Laacibka kooxda Atletico Madrid, Antoine Griezmann, ayaa sheegay in xilli ciyaareedka soo socda uu kooxdaasi sii joogi doono oo haddii uu kooxda isaga tago ay tallaabadaasi noqon doonto mid nacasnimo ah kaddib markii la diiday racfaankii ay kooxdu ka qaadatay xayiraaddii soo iibsiga ciyaartoyda ee lagu soo rogay.
Racfaanka ay Atletico Madrid ka qaadatay xayiraadda laga saaray inay ciyaartoy la soo wareegto ee ay ku mutaysatay jabinta shuruucda FIFA ee saxiixa ciyaatoyda da’da yar ayaa waxaa diidday Maxkamadda Caalamiga ah ee Ciyaaraha.
“Waqti adag ayey u tahay kooxda,” ayuu Griezmann u sheegay TV Faransiis ah.
Laacibkan u dhashay dalka Faransiiska ayaa u sheegay TV-ga Telefoot inuu go’aansaday inuu lasii joogo kooxda Spanishka kaddib markii ay go’aan wada gaareen lataliyihiisa ciyaaraha Eric Olhats.
Maadaama Arletico Madrid aanay ciyaartoy cusub la soo wareegi karin tan iyo 1-da Janaayo 2018, waxaa la filayaa inay ciyaaryahan Griezmann ay usoo bandhigi doonto qandaraas cusub – iyadoo midka haatan uu kooxdaasi kula jiro uu ka mid yahay qodob sheegaya in 100 milyan oo euro lagu fasixi karo.
Atletico iyo Real Madrid ayaa July 2016 waxaa laga mamnuucay inay laba jeer oo ah xilliga la kala iibsado ciyaartoyda aanay la soo wareegi karin ciyaartoy, sidoo kalana waxaa la saaray ganaax lacageed kaddib baaritaan FIFA ay ku sameysay oo khuseeya ciyaartoy da’doodu ka yar tahay 18 sano oo u dheelay Atletico intii u dhaxaysay 2007 ilaa 2014 iyo Real Madrid intii u dhaxaysay 2005 ilaa 2014.